चीन–अमेरिकाको चिसिएको सम्बन्ध छिट्टै सुध्रिने छैन ! – मार्टिन जाक्वेज - Online Majdoor
चीन–अमेरिकाको चिसिएको सम्बन्ध छिट्टै सुध्रिने छैन ! – मार्टिन जाक्वेज
२५ बैशाख २०७७, बिहीबार १२:१२
काठमाडौँ, २४ वैशाख । अमेरिकामा कोभिड–१९ को सङ्‍क्रमण बढ्दै गएपछि ट्रम्प प्रशासनले चीन र डब्लूएचओविरुद्ध यो महामारी रोक्‍न नसकेको आरोप लगायो । जबकि अमेरिकाको हवाइमा यो भाइरस गत सेप्टेम्बरमै देखिएको स्वास्थ्यविज्ञहरूको दाबी छ । मार्टिन जाक्वेजले यो भाइरस सङ्‍क्रमण र चीन–अमेरिकाबीचको सम्बन्धबारे केही विचार राखेका छन् । जाक्वेजले सन् २००९ मा ‘चीनले जब विश्वमा शासन गर्छ’ नामक पुस्तक लेखेका थिए । बेलायतको क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका पीएचडी उपाधि प्राप्त विद्यार्थी जाक्वेज बेलायतको नयाँ कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्य पनि थिए । उनले चीनको इतिहास र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पनि अध्ययन गरे । पत्रकार, सम्पादक, प्राज्ञिक, राजनीतिक विश्लेषक, लेखक जाक्वेजले सीजीटीएनका शु सिकङसँगको कुराकानीमा आफ्ना विचार यसरी राखे –
जाक्वेज : अमेरिकामा यो भाइरस फैलिएदेखि यो कति पीडादायी र विनाशकारी छ, कति मानिस मर्दै छन् । थाहा पाएपछि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले चीनविरूद्ध आरोप लगाउन सुरू गरे । यो अमेरिकाको कमजोरी चीनमाथि थोप्न र आफू खराब नदेखिने नियत हो । तर अमेरिकामा बढ्दो भाइरस सङ्‍क्रमणले यसको खराब स्थितिलाई देखाउँछ नै । यो खराब स्थिति नै अमेरिकाको अनुहार हो ।
अमेरिकाले चीनविरूद्ध आरोप लगाउनु नै समस्या हो । यसैकारण अमेरिकाले कोभिड–१९ सङ्‍क्रमणलाई देख्नसकेन । ट्रम्पले यो भाइरस चीनमा सीमित हुने र विश्वभर फैलिन नसक्ने दृष्टिकोण राखे । ट्रम्पले यसलाई ठट्टा भने । उनले यो सङ्‍क्रमणको विनाशलाई बुझ्‍न सकेनन् । यो भाइरस सङ्‍क्रमण बढ्दै आउँदा अमेरिका राजनीतिक, बौद्धिक, चिकित्सकीय र वैज्ञानिकरूपमा प्रतिरोध गर्न सक्षम भएन ।
हामीलाई थाहा छ – चीनले हुपेइमा यो भाइरस नियन्त्रण गर्न आधारभूतरूपमा व्यवस्थापन गर्‍यो । चीनको ठूलो भूभाग यो भाइरस सङ्‍क्रमणबाट अलग भयो । अमेरिकामा यो भाइरस छिट्टै सबै राज्यहरूमा फैलियो ।
सीजीटीएन – ट्रम्पले डब्लूएचओविरूद्ध लगाएको आरोपबारे केही भन्नु छ कि ?
जाक्वेज : ट्रम्प सबै बहुपक्षीय संस्थाका विरोधी छन् । उनको शत्रुता संरा सङ्घसित छ । उनी युनेस्कोबाट पछि हटे । ट्रम्प यस्ता संस्थानहरूलाई मनपराउँदैनन् । डब्लूएचओविरूद्ध उनको शत्रुता स्पष्टसँग देख्न सकिन्छ । डब्लूएचओले उनलाई मन नपर्ने निर्देशिका जारी गर्दै छ भने मन नपर्ने कार्य गरिरहेको छ । डब्लूएफओले यो भाइरस सङ्‍क्रमण रोक्ने चीनको कदमलाई प्रशंसा गर्‍यो ।
यो सङ्कटको बेला चीनविरूद्ध र विश्वमा धेरै प्रभाव भएको वैधानिक एवम् सम्मानित संस्था डब्लूएचओविरूद्ध लडेकै कारण ट्रम्प गिर्दै छन् । हामीले भन्नैपर्छ – चीन र डब्लूएचओले यो भाइरस नियन्त्रणमा गरेको कडा मेहनत प्रशंसनीय छ ।
सीजीटीएन : कोभिड १९ नियन्त्रणपछि चीन र अमेरिकाको सम्बन्ध कस्तो होला ?
जाक्वेज : दुई देशको सम्बन्ध केही हदसम्म द्वन्द्वपूर्ण हुनेछ । द्वन्द्वपूर्वको अर्थतन्त्र, आलोचना तथा यस्तै अन्य आक्रमण चालू रहनेछ । अमेरिकाले यो आक्रमण चालू राख्नेछ । ट्रम्प राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएयता सन् २०१६ देखिको अवधि पनि यस्तै छ । अमेरिकाको केन्द्रीय राजनीतिको सम्पूर्ण शक्ति चीनविरूद्ध लक्षित छ । यस्तो किन भयो ?
यसका दुई कारण छन् : पहिलो, अमेरिकाले चीन यसरी आर्थिकरूपमा अघि नबढ्ने र अमेरिकी अर्थतन्त्रको चुनौतीको रूपमा नउभिने आकलन गरेको थियो । दोस्रो, अमेरिकाले चीनको राजनीतिक व्यवस्था पश्चिमी प्रजातन्त्रजस्तो हुने ठानेको थियो ।
अमेरिकाको यी दुवै अनुमान गलत भयो, अमेरिकाको चीनलाई कमजोर नठान्ने दृष्टिकोणले अमेरिकालाई चीनविरूद्धको शत्रुतामा पुर्‍यायो ।
यो घटनादेखि अघिलो युग समाप्त भयो । चीन र अमेरिकाबीचको सुमधुर सम्बन्धको लागि छलफल र निर्णय गर्ने ठाउँसमेत समाप्त भयो । सन् २०१६ मा सुरू भएको नयाँ चरण छिट्टै समाप्त हुने देखिँदैन ।